Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » COVID Delta Kaladuwanaanta Bulshada Ku Faafaya Hawaii
Jebinta Wararka Mareykanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Waaxda Caafimaadka ee Waaxda Caafimaadka Shaybaarada Gobolka (SLD) waxay xaqiijineysaa noocyada kala duwan ee 'SARS-CoV-2' B.1.617.2, oo sidoo kale loo yaqaan 'Delta variant of interest', ayaa ku sii faafaya gobolka.
Ilaa hadda, waxaa jiray seddex kiis oo kaladuwanaanta Delta ee la xiriirta safarka ka socda qaaradda Mareykanka. Laba ka mid ah kiisaskaas ayaa ku yaal O'ahu midna wuxuu ku yaal Jasiiradda Hawai'i.
Intaa waxaa sii dheer, Qeybta Sheybaarrada ee Gobolka ayaa aqoonsatay noocyada Delta ee muunad laga soo qaatay qof deggan O'ahu oo aan lahayn taariikh safar. Waaxda Caafimaadka ayaa baareysa si loo ogaado heerka gaarsiinta gudbinta qoyska iyo bulshada.
Dhammaan dadka qaba COVID-19 ee uu sababay Delta Delta waxay u muuqdeen astaamo; midkoodna isbitaal lama dhigin. Kaliya mid kamid ah afarta qof ayaa si buuxda looga talaalay COVID-19. Saddexda kiis ee laxiriira safarka, dhammaan xubnaha qoyska iyo dadka xiriirka dhow la leh ee si buuxda looga tallaalay COVID-19 ayaa laga helay tijaabo.
Shirka jaraa'id ee maanta mas'uuliyiintu waxay ka jawaabayaan su'aalaha waxayna xallinayaan walaacyada, sidoo kale safarka iyo dalxiiska dalxiiska ku soo badanaya Aloha Gobol.
Waxaa jira taariikho badan oo ku dhow 30,000 oo loo arko inay yihiin soo-booqdayaal diiwaangashan oo ka yimid Dhulweynaha Mareykanka.
Qatar Airways waxay ballaarineysaa shabakadda Mareykanka in ka badan 100 toddobaadle ah ...
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay duulimaadyada cusub ee Colombia, Mexico iyo Mareykanka ...
Wadahadalka Eswatini waa la wada ogolaaday